China Aurora Cannabis na-etinye 1.7 nde square ụkwụ nke behemoth na ahịa mpaghara ụlọ ọrụ na suppliers | Aịxiang
Aurora Cannabis na-ezube ibutu otu n'ime griin haus kachasị na nke kachasị ọnụ ejiri na-eto cannabis n'akụkọ ihe mere eme, mana onye ọ bụla nwere ike ịzụ ahịa nwere ike na-arụsi ọrụ ike iji nwetakwu mmefu ka e wee rụchaa ọrụ ahụ nke ọma.
Dị ka n'ihu ọha dị ihe nkwado, Aurora etinyela 260 nde Canadian dollar (205 nde US dollar) "niile gụnyere" n'ime 1.7 nde square ụkwụ mgbagwoju na Medicine okpu, Alberta, ebe ụlọ ọrụ ga-isi Colliers International, emi odude ke Toronto. edepụtara dị ka onye ndụmọdụ gbasara ego na onye na-edepụta aha maka ezigbo ala na-ezuru akụkụ ụfọdụ.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na onye zụrụ azụrụ ahụ emechala mbụ ojiji nke griin haus ("dị ka ụlọ ọrụ griin haus nke nkà mmụta ọgwụ"), ọ nwere ike ịchọ ọtụtụ nde dollar na mmefu ego ọzọ, ma ọ bụrụ na emechara ya maka ndị na-abụghị cannabis. iji, ọ nwere ike ịchọ obere mmefu.
Ndepụta a bụ ihe atụ kachasị ọhụrụ nke mwepu nke nnukwu ndị na-emepụta Canada na nnukwu ụlọ griin haus n'afọ gara aga, onye nrụpụta ahụ agafeela oke ala ubi n'etiti 2017 na 2019.
Dị ka akụkọ "Cannabis Business Daily" si kwuo, ọtụtụ n'ime ọrụ griin haus, ma e wuru site na njikọta na ịzụrụ ma ọ bụ mechaa site na njikọta na ịzụrụ ihe, mechara mee ka ndị na-emepụta ikike Canada na-ata ahụhụ ozugbo na ngụkọta nke nde dollar na mfu ụlọ ma nweta ọtụtụ ijeri. nke dollar. Ndepụta nke ngwaahịa.
Adreesị dị na broshuọ Greenhouse Alberta dabara na adreesị nke usoro Aurora Sun ji.
MJBizDaily mụtara na Aurora kwụsịrị iji Aurora Sun griin haus n'afọ gara aga, na ọ na-ebute ihe onwunwe ahụ n'ahịa na-enweghị nsogbu "ego nchọpụta" nke ịjụ ọnụ ahịa. Nke a ga-enyere aka ikpebi ọnụ ahịa akụrụngwa na ahịa na-agbanwe agbanwe.
Dị ka broshuọ ahụ si kwuo, a na-edepụta "mmezu ebumnuche" dịka njedebe nke nkeji nke abụọ ruo mmalite nke nkeji nke atọ nke afọ a.
Ntugharị a na-abịa otu afọ ka Aurora nakweere onyinye ya maka nnukwu griin haus na Exeter, Ontario, ọnụ ahịa ahụ bụ ihe dị ka ọkara nke ọnụahịa ndenye C $ 17 na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọnụahịa azụrụ mbụ.
Na ozi email na MJBizDaily, onye na-ekwuchitere kwuru na Aurora "na-eleba anya na netwọk ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ iji hụ na ọ dabara maka azụmahịa anyị ugbu a na obere oge."
Nkwupụta ahụ gara n'ihu: "Na nzaghachi maka mgbanwe ndị ọhụrụ na ụlọ ọrụ na usoro anyị chọrọ, ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara na ọ ga-akwụsịtụ ọrụ na Aurora Sun na Medicine Hat, Alberta."
"Anyị na-arụsi ọrụ ike na-akwalite ojiji ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ. Enweghị ozi zuru ezu karị n'oge a n'ihi na usoro a ka nọ na mmalite ya."
Maka ọrịre bụ nnukwu ụlọ dị square nde 1.4 yana ụlọ inyeaka 285,000 square ụkwụ.
Dị ka broshuọ ahụ si kwuo, onye na-ere ahịa (Aurora na nke a) bụ "meghere maka ụdị azụmahịa dị iche iche nke nwere ike ime ya na ụdị nlebara anya iji bulie uru."
"Nke a ga-agụnye, ma ọnweghị oke na, ire ere ozugbo nke otu ụlọ ma ọ bụ abụọ na ego ma ọ bụ ụdị echiche ndị ọzọ; ire nke akụkụ nke nhatanha nye onye mmekọ; ma ọ bụ mgbazinye nke mgbagwoju anya."
Agbanyeghị na etinyela nnukwu ego, griin haus Medicine Hat ka emechabeghị.
"Achọrọ mmefu ego mgbakwunye iji wuchaa ụlọ ọrụ ahụ, mana a ga-ekpebi ọnụ ahịa ya site na ebumnuche onye zụrụ ya," onye isi njikwa Colliers International Matt Rachiele gwara MJBizDaily site na email.
"Anyị enwetala ntụzịaka mbụ site n'aka ndị injinia. Ka ọ dị ugbu a, ọnụ ahịa imecha ụlọ ọrụ niile maka ụfọdụ ihe eji eme wii wii nwere ike ịbụ ihe na-erughị 10% nke mmefu, mana iji gafere ebumnuche mbụ ya, ọ ga-emefu nnukwu ego. ego."
Rachiele kwuru na a rụchaala isii n'ime ọnụ ụzọ iri atọ na asaa nke nnukwu ụlọ ahụ yana isii ndị ọzọ arụchaala akụkụ ụfọdụ.
Akwụkwọ nkwado ahụ kwuru, sị: "Ọ bụ ezie na e bu n'obi imecha ya dị ka ụlọ ọrụ griin haus dị elu, ụlọ ahụ na ngwa ndị yiri ya nwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ dị mfe iji mee ihe dị iche iche."
Matt Lamers bụ onye nchịkọta akụkọ mba ofesi nke Cannabis Business Daily, dabere na nso Toronto. Ị nwere ike ịkpọtụrụ ya site na [Email Protection].
Enwere m olile anya na mmadụ ga-enyocha ihe kpatara oke ahịa cannabis nke Canada ji na-eche oke. Enwere ike ito eto n'ụzọ iwu na-akwadoghị (na-enyeghị ikike) ma ọ bụ oke ụtụ isi kọwaa ụfọdụ nsogbu ahụ?
Ọ ga-amasị m ịhụ ka Canada na-ebupụ cannabis na Illinois. Nje ndị anyaukwu ebe ahụ na-ana nnukwu ego ma na-erite uru n'aka ndị ahịa ha. Ha enweghị ụkpụrụ ma ọ bụ ụkpụrụ azụmahịa. Ekwesịrị ịtụ ihe okike dị ka nke a mkpọrọ.
Azụmahịa Cannabis kwa ụbọchị-isi mmalite ntụkwasị obi nke akụkọ kwa ụbọchị, nke ndị odeakụkọ ọkachamara na ụlọ ọrụ dere naanị. mụtakwuo
Oge nzipu: Mar-25-2021